Iingcebiso ezi-5 zikaGoogle zeFowuni eKhuselekileyo ye-Android | I-Androidsis
Uyenza njani ukuba ifowuni yethu ye-Android ikhuseleke ngakumbi, ngokukaGoogle
Ukhuseleko lwefowuni yethu ye-Android yinto ebaluleke kakhulu. Ngesi sizathu, uGoogle uhlala epapasha rhoqo iingxelo zokhuseleko kwimeko yenkqubo yokusebenza kunye neefowuni. Ukongeza ekusebenzeni kwi ukususwa kwe-malware kunye nolunye uhlobo lwesoyikiso olungena kuGoogle Play, enkosi kwizixhobo njengoKhuselo lokuDlala.
Ifemi ngoku isishiya nothotho lweengcebiso ngokhuseleko. Enkosi kwezi ngcebiso, uGoogle ujonge Abasebenzisi be-Android bakhuselekile kwifowuni ngamaxesha onke. Ke kulungile ukuthathela ingqalelo ingcebiso umntu ophetheyo kwinkqubo yokusebenza ekufuneka abelane ngayo. Ezinye iingcebiso eziza kusinceda, njengeeapps zokhuseleko.
1 Isoftware ehlaziyiweyo
2 Amaphasiwedi ahlukeneyo
3 Imeyile yokuBuyisa
4 Ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini
5 Lawula ukuba zeziphi izixhobo ezinokufikelela kwiakhawunti yakho
Into ekufuneka bayigcine engqondweni abasebenzisi bayo, kodwa kwiimeko ezininzi ilibalekile. Iinguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza kunye nohlaziyo lokhuseleko zibalulekile. Kuba bayazikhusela kuzo zonke izoyikiso. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba abasebenzisi beefowuni ze-Android bahlaziye iifowuni zabo. Gcina iifowuni zihlaziywa ngohlobo lwamva nje iyafumaneka kwisoftware ethile.
Ngoko ke, gcina zombini izicelo kunye nenkqubo isesikhathini ngawo onke amaxesha kubalulekile. Nangona zihlala zikho ezinye abavelisi abathobela ngcono malunga noku.
Abasebenzisi bathambekele sebenzisa amaphasiwedi afanayo kwiindawo ezininzi. Into eqondakalayo, kodwa inokuchaphazela kakhulu ukhuseleko. Ukusukela ekugqibeleni, xa umntu eqikelela iphasiwedi, banokufikelela kuzo zonke iintlobo zeakhawunti okanye iiprofayili zomsebenzisi. Kuyenzeka nakwi-Android rhoqo. Ke ngoko, kuya kufuneka usebenzise iipassword ezahlukeneyo, rhoqo.
Inxalenye elungileyo yile sinezixhobo ezisinceda kwi-Android. Ukongeza ekubeni nenani elikhulu le Abaphathi begama lokugqitha, Kulula ngokwenene ukukwazi yenza iiphasiwedi ezinamandla, okungekho lula ukuba zizame. Ke, ukhuseleko lweakhawunti lunokuphuculwa ngokubonakalayo. Zizinto ezimbalwa ezilula, kodwa zinokubaluleka xa kufikwa ekunciphiseni amathuba okuba iakhawunti yethu igqekeziwe.
Ukuba uyilibale iphasiwedi, Kuya kufuneka ubuyisele i-imeyile. Ukuze ube nokufikelela kwiakhawunti yakho kwakhona. Inokwenzeka nakuwe kwimeko apho ulibale iPIN yokungena kwifowuni yakho ye-Android. Kodwa kubalulekile ukuba abasebenzisi be-Android babe nale imeyile okanye inombolo yefowuni emiselweyo. Ukuze xa kwenzeka into ethile yenzeke, kuya kubakho ukuququzelela ukufikelela kwi-akhawunti ngalo lonke ixesha, okanye kwifowuni yakho.
Ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini
Inkqubo esetyenziswa kakhulu namhlanje kwaye sele ifumana ubukho. Ukuqinisekiswa kwamanyathelo amabini yindlela oko kuyasivumela ukuba singene kwiakhawunti yethu ngendlela ekhuselekileyo. Kuba inyathelo lesibini inokuba ikhowudi iya kuthunyelwa ngeSMS kwifowuni yethu ye-Android. Indlela yokuthintela umntu othile ukuba angene kwiakhawunti yethu. Ke kuyacetyiswa ukuba uyisebenzise.
Sele sikuxelele malunga noku kungqinisisa okukumanqanaba mabini, ukongeza kwindlela apho inokusebenza kuGoogle. Ayisiyonto inzima, kodwa ngokuqinisekileyo iya kuba njalo yenza umahluko omkhulu kukhuseleko lweakhawunti yakho. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ukuba kunokwenzeka kubekho urhano iakhawunti yakho kaGoogle igqekeziweKubalulekile ukuyivula kwi-Android.
Lawula ukuba zeziphi izixhobo ezinokufikelela kwiakhawunti yakho
UGoogle usivumela ukuba sibone iifayile ze izixhobo ezinokufikelela kwiakhawunti yethu. Yindlela esinokuyisebenzisa ukwazi ukuba banayo igqekeziwe okanye ifikelele kwiakhawunti yethu ngaphandle kwemvume. Ngaphandle kwamathandabuzo, sisixhobo esiluncedo kakhulu kukhuseleko lwefowuni. Ke kufuneka isetyenziswe kwiimeko ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » Uyenza njani ukuba ifowuni yethu ye-Android ikhuseleke ngakumbi, ngokukaGoogle
I-Samsung Galaxy M ithengisiwe ngemizuzu emi-3 kuphela
I-Samsung patent i-S Pen enekhamera